u-Miller ushaye i-Bangladesh yaze yagoba
u-David Miller ubhale igama lakhe emarekhodini ekhilikithi emfushane njengoba eshaye ikhulu elishesha kunawo wonke emlandweni wekhilikithi yama-T20 International ukuhlelela ama-Standard Bank Proteas ukuthi anqobe ngama-runs angu-83 kumdlalo wokugcina we-tour ye-Bangladesh e-Senwes Park ngeSonto.
Ukunqoba kunike ama-Proteas ukunqoba ngo-2-0 kwi-series ye-KFC T20 International futhi kubenze banqoba nge-whitewash kuwona womathathu ama-format.
u-Miller uhlanganise ikhulu lakhe emabholeni angu-35 okusheshe ngamabhola angu-10 ukudlula owayedlalela ama-Proteas, u-Richard Levi. Uphinde waba umdlali wase-South Africa wesine wokuthola ikhulu le-T20 International emuva kuka-Levi, u-Morne van Wyk no-Faf du Plessis. Uphinde washodelwa ukushaya okukodwa ukulingana no-Yuvraj Singh owashaya o-six abayisithupha kwi-over eyodwa. Ushaye amabhola okuqala amahlanu aphume ku-Saifuddin ezihlweleni kodwa wahluleka ukukha elesithupha wavele wathola i-run eyodwa.
Kutholwe ama-runs angu-31 kuleya-over yena wasuka ku-51 waya ku-100 emabholeni angu-13 kuphela, ngesikhathi ehlasela wathola o-six abayisithupha kanye no-four ababili.
Ngebhadi le-Bangladesh uphunyukile ngaphambi kokuthi athole i-run kodwa emuva kwalokho akubanga nje i-Miller Time kodwa kwaba i-Miller day.
Aze aqale ukuhlasela, bekubukeka sengathi u-Hashim Amla angaba owesine we-South Africa ukuthola ikhulu njengoba efike ku-85 emabholeni angu-51 (11 fours, 1 six) ngaphambi kokuthi anqakwe kwi-deep kodwa u-Miller uqhubekile (101 engaphumile emabholeni angu-36, 7 fours, 9 sixes).
Ngesinye isikhathi i-Bangladesh ibukeke kahle emdlalweni ngesikhathi inciphisa ama-Proteas ku-45/2 kuma-overs ayisithupha e-power play no-78/3 emuva kwama-overs angu-10 kodwa lokho bekusakuncane ngaphambi kokuhlasela.
Ukapteni we-Bangladesh u-Shakib Al Hasan, ovule ngokuphosa kwi-pitch ehamba kancane, wathola u-2/24 kuma-overs akhe amane kodwa udlulwe ukapteni we-South Africa u-JP Duminy endimeni efanayo ngesikhathi ethola u-2/23.
i-Bangladesh ilahlekelwe ama-wicket amaningi ngesikhathi bejaha umphumela, balahlekelwa abadlali abaphezulu abane kuma-over e-power play.
Aqhubekile nokuphuma ngokulandelana ama-wicket njengoba i-run rate ebifunwa igcine isiphumile esandleni, yafika ku-23 kuma-overs okugcina amahlanu. Nangesikhathi kuhlasela u-Miller kusele ama-wicket ambalwa, ama-Proteas athole ama-runs angu-90 kuma-overs okugcina amahlanu.
u-Miller ube i-KFC Man of the Match ne-KFC Man of the Series.
Ngokulimala ka-Faf du Plessis u-Du Plessis ukhishiwe kwi-KFC T20I series Ama-Proteas abheke ukunqoba ngo-3-0 u-De Villiers ubuya ngokuncomayo lapho okumele abe khona i-CSA ihalalisela ama-Proteas ngokunqoba i-ODI series Ama-Proteas ashishiliza ekunqobeni ngama-wicket angu-10 Sifuna omunye umdlalo ophezulu – u-Du Plessis u-Paterson ubizelwe iqembu lama-Proteas le-ODI u-Paterson ungenela u-Morkel olimele u-Rabada uhola ama-Proteas ekunqobeni ngama-runs angu-333 Kudingeka sibambisane ukuze sinqobe - u-Bavuma